Alexander Nikiforov - footballer amaSoviet nasemakamu Ukrainian ngubani okwamanje udlala njengendlela mdlali. ERussia kwaphawulwa imidlalo eqenjini "KAMAZ" kusukela Chelny, lonke elinye isikhathi owadlalela amaqembu Ukraine and isiHungary.
Alexander Nikiforov wazalelwa e-Odessa, ngo-October 18, 1967. Ibhola Wathunjwa esafunda esikoleni. Ngakho, ngangenela isikole we "Chernomorets" zendawo. Umqeqeshi sakhe sokuqala kwaba Gennady sikole futhi Igor Ivanenko.
Lwathi luphela okusezingeni eliphezulu ezingeni lesikole selingaphezu kabili iqembu main omuzi. Ngaqala ukudlala intsha "Chernomorets" njengoba mdlali. Wahlala ethembekile lokhu indima kuze kube sekupheleni-career.
Usizo lwabenza imisenenzi ukudlala umsebenzi yaqala ngo-1986 e-Odessa elinye iqembu - i-SKA. Ukufinyelela lokuya empini, u-Alexander Nikiforov ezingenamafutha kwadingeka ukuthi ahambe ukukhonza emabuthweni ahlomile. Nokho, i-zemidlalo impumelelo walethwa ukudlala abakuwo football club. I-SKA wayechitha sonke ukuphila service - iminyaka 2. Ithimba ke kwenziwa ezingeni eliphansi - e ubuqhawe kazwelonke Ukraine SSR. impumelelo Little is hhayi izuzwe. Alexander Nikiforov kwaba umdlali we isakhiwo esiyisisekelo, aphethwe 74 ukufana wakora 4 imigomo.
Debut e "Chernomorets"
Ukubuyela ukuphila ezisetshenziswa umphakathi ngokushesha Nikiforov bakhangwa iqembu esemqoka yedolobha - Odessa "Chernomorets". Wenza DEBUT yakhe eqenjini lokuqala ngo-1988, u-Alexander Nikiforov. Footballer labetibambile umdlalo walo wokuqala kuleli phiko phezulu wase-USSR ubuqhawe.
Ngo-1988, iqembu yabonisa umdlalo oluyingozi, kodwa ngenxa ngokunqoba eziningana engxenyeni isizini ukuze bazivikele wokulwela ukuphila yesibili. Ngenxa yalokho, "Chernomorets" eseqedile esikhundleni 13, beshaya onqobayo 9 kuphela 30 okufanayo.
isipiliyoni Isizini elandelayo buye kakade Alexander Nikiforov, ogama isithombe kwaba kuwo wonke amaphephandaba Odessa ezemidlalo ka, wahola iqembu yanqoba nge umuntu ozoyisiza umlingani. Ngesikhathi sekugcineni leqembu ubuqhawe iwine umzabalazo supremacy phakathi etafuleni. Nge inzuzo kunangonyaka izimbangi wathatha indawo 6th, okuyinto esenikwa ithuba lokukhuluma Cup European.
Esikhathini UEFA Cup, u-Alexander Nikiforov, ogama biography usuqalile kakade ukuba sibe nesithakazelo namanye amakilabhu, seziqalile ukusetshenziswa yayo ngo-1990. Ngo ngomzuliswano wokuqala "Chernomorets" akhishwe draw Norwegian "Rosenborg" (3: 1, 1: 2). Kodwa eyesibili yeza kuthi angivume French "Monaco". Ngemva draw emdlalweni we umdlalo ongalwazi Odessa ubukhulu yaphela ukunqotshwa 0 ku: 1.
Inani "Chernomorets" Nikiforov wachitha 57 ukufana wakora 6 imigomo.
umsebenzi Ngaphezu kwalokho Player savela amaqembu ehlukene, okuyinto azibonela yona ngezinye izikhathi wabuyela Odessa lwakhe "Chernomorets".
Ngo-1990, wathuthela ibe BVSHTS nesizotha Hungarian, lapho afike achitha khona zonyaka ezintathu. Ngesikhathi esifanayo enkundleni uvele kanini - izikhathi 26 kuphela ngaso sonke isikhathi. Ngo-1992, ngokokuqala ngqa emuva "Chernomorets" ngaleso sikhathi bekhonze e ubuqhawe Ukraine. Odessa ithimba wayephakathi abaholi ubuqhawe, wawina nezindondo zethusi, yesibili ngemva Kiev "Dynamo" futhi laseDnepropetrovsk "Dnepr".
Ngo-1993, wathuthela Ephakeme league Russia Alexander Nikiforov. football Soviet esikhathini esidlule amabili zonyaka, owadlalela "KAMAZ" kusukela Chelny. Enkundleni, avele njalo, ukudlala ingqikithi 16 okufanayo.
Khona-ke yena wadlala futhi e-Odessa "Chernomorets" FC "Nikolaev" futhi Hungarian MTK. Ngo-1996 waphindela e-"KAMAZ". Le sizini kwaphumelela. Nikiforov kwadingeka 11 imidlalo lapho kukora kabili. Ukuphela kwesizini iqembu eseqedile esikhundleni 14, amaphuzu amathathu off the zone yizembe.
1997 eyayiqhutshelwa Russian First Division for the team "Gazovik-Gazprom" ka Izhevsk, eyaqala 12.
Ngaphezu kwalokho ukudlala umsebenzi zabhuntsha. Ngemva "Gazovik-Gazprom" wayedlala kuphela yesibili league ubuqhawe e-Ukraine futhi amateur football club.
Wayedlala amaqembu Odessa "Fisher-Dorojnik" SK 'Odessa ", le football club" esiginali "futhi Digital. Waqeda amathuba okuba umculi okhokhelwayo ngo-2005.
Nikiforov umndeni buhlobene eduze football. umzalwane Yuri yakhe ukusebenza odumile eqenjini lesizwe yeRussia. Wayedlala ngoba eMoscow "Spartak", ekubeni amaqhawe amathathu ngesikhathi eRussia kanye amagoli ukuze obomvu nomhlophe 16 emidlalweni engu-85 okufanayo.
Yuri Nikiforov, kanye umzalwane, waqala e-Odessa "Chernomorets", wakhonza njengephayona wasemuva. Ngo-1996, wathuthela Izilimi enkulu Liga, lapho wadlalela "Zemidlalo" hihonsky. Ngemva kwalokho, le-Dutch PSV babe umsebenzi wakhe, "Waalwijk" futhi Japanese "Urawa Red Diamonds." Isibalo iziqu kungaba ngokwabo ukuletha onqobayo ezintathu ubuqhawe yeNetherlands abantu abanganaki nokunqoba eJapane Cup. Kusukela ngo-1993 kuya 2002 wayedlala eqenjini lesizwe yeRussia. Labetibambile 59 okufanayo, okuyinto kukora amabhola eziyisithupha. Waba khona 1996 European Championship kanye World Championships ka 1994 kanye 2002. Ngemva World Cup isinqumo zomhlalaphansi.
Ihlobene ngokuseduze football nomalume Alexander Nikiforov - Yuriy Zabolotny. Ngo ubuqhawe yase-USSR, wachitha imidlalo engaphezu kwamakhulu amabili e-Odessa "Chernomorets" wadlalela Kiev "Dynamo" futhi Nicholas "umakhi womkhumbi". Wayeyilungu leqembu kazwelonke Ukraine SSR. Ngo-1962 wathola isihloko Master of Sports zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa.
Ubaba Alexander Nikiforov wayebuye abe umdlali webhola lezinyawo, kodwa ukwenze cishe impumelelo okungenani. Eminyakeni 60 wayedlala ethimbeni reserve Odessa "Chernomorets". Esikhathini esizayo, yini umsebenzi wakhe iye yathuthuka.
Ngemva kokuphela ezemidlalo yakhe umsebenzi Nikiforov baba umqeqeshi. Ngo-2001, wabahola amateur ithimba "esiginali" kusuka Odessa.
Futhi ngo-2010, wangenela izisebenzi coaching we "Chernomorets" bomdabu. Ithimba ngesikhathi ayedabula nezikhathi ezinzima, ukukhuluma isi-Ukrainian Okokuqala League Championship.
Ukuze isizini 2010/2011 iye wajuba ukubuyela isihlanganisi phezulu. I imbangi main Izakhamizi Odessa kwaba club "Alexandria", okusho ekugcineni entanjeni balahlekelwa 4 amaphuzu. Nokho, umgijimi-up, kuhlulekile aphinde sokuqala indiza phezulu.
Domenico Berardi - ithalente abasha Italian
Russian umdlali Kryuchkov Aleksandr